သင် အသက်(၂၀မှ ၂၈ )အတွင်း ဆိုရင် ဒါကိုမဖြစ်မနေဖတ်ပါ။ - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / အလှအပရေးရာ / သင် အသက်(၂၀မှ ၂၈ )အတွင်း ဆိုရင် ဒါကိုမဖြစ်မနေဖတ်ပါ။
Apann Pyay 8:37 PM ဗဟုသုတအစုံ , အလှအပရေးရာ Edit
အသက် (၂၀)ကျော်အရွယ်ဟာ ဘ၀မှာ အကောင်းဆုံးအချိန် ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှာအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်လာသလို မိဘ တွေကလည်း အရွယ်ရောက်လာသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆက်ဆံလာချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီအရွယ်မှာ ငွေရှာဖို့အတွက်ကိုလည်း အရမ်းကိုစိတ်အားထက်သန်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရွယ်မှာ သင့်အနေနဲ့ ဘွဲ့တစ်ခုခုရပြီးသည်ဖြစ်စေ မရသေးဘူးဖြစ်စေ၊(၂၀)ကျော်အရွယ်နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် စတင်ပြင်ဆင်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အများစုကတော့ ဒီအချိန်မှာ ထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့ ကြီးကြီးမားမားအောင်မြင်မှုကို ရယူဖို့က အရမ်းငယ်သေးတယ်လို့ ယူဆတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အသက်(၂၀)ကျော်အရွယ်ဆိုတာ သင့် ရဲ့ဘ၀ တလျှောက်လုံးမှာ အောင်မြင်မှုတွေဆွတ်ခူးရယူနိုင်ဖို့အတွက် အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကို စတင်ပျိုးထောင် မွေးမြူသင့်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် (၂၀)ကျော်တွေအတွက် ဒီနေ့လုပ် မနက်ဖြန်မှာ ထူးခြားချက်တွေ ခံစားရမယ့် လုပ်ဆောင်စရာ(၇)ခုကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
သင့် ရဲ့ပညာရေးကိုဆုံးခန်းတိုင်ပြီလို့ မသတ်မှတ်လိုက်ပါနဲ့။ ဆက်လက်လေ့လာသင်ယူနေဖို့လိုပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ အလုပ်ထွက်ပြီး MBA ဘွဲ့သွားယူဖို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ သင် တတ်နိုင်သမျှ အရာအားလုံးကို သင်ယူတတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့အရေးကိစ္စအတွက် အချိန်တွေအလဟဿကုန်ဆုံးနေမယ့်အစား အခမဲ့တက်ရောက်နိုင်တဲ့ သင်တန်းကျောင်း တွေမှာ လေ့လာသင်ယူပါ။ အချိန်မရှိဘူးဆိုရင်လည်း အွန်လိုင်ကနေ အခမဲ့သင်ကြားပေးနေတာတွေရှိပါတယ်။ ကြိုးစားရှာဖွေ လေ့လာပါ။
အမြန်လှုပ်ရှားရင် မတော်တဆမှု တွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မတော်တဆမှု ကိုကြောက်နေရင် မြန်မြန်လှုပ်ရှားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လူအများစုက အလုပ်ပြောင်းတာလိုမျိုး ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ရမှာကို မှားသွားမလား စိုးရိမ်ကြောက်လန့်တတ်ကြပါတယ်။ သင့်အတွက် တစ်ခုခုအဆင်မပြေဘူးခံစားရရင် ရုန်းထွက်ဖို့အတွက် ကြောက်နေလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ နယ်ပယ်သစ်မှာ သင်အခက်တွေ့ချင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုရုန်းထွက်လိုက်မှသာ သင် နဲ့ကိုက်ညီမှုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုမှတ်ထားရမှာက သင်ဘယ်ကြိမ်ရှုံးနိမ့်လဲဆိုတာထက် သင်ဘယ်လောက်အောင်မြင်လဲဆိုတာကိုပဲ လူတွေက အရေးစိုက်ကြတာပါ။
ဒီတစ်ခုကို သင် စိတ်ဝင်စားမှာပါ။ သင့်ရဲ့ငွေကြေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို စီမံရမယ်ဆိုတာက အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ကဲ တွက်ကြည့်ရအောင်။ အသက်(၂၅)နှစ်မှာ စတင်ပြီး တစ်လမှာ ဒေါ်လာ(၂၀၀) စုဆောင်းတယ် ဒါမှမဟုတ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်တယ် ဆိုကြပါစို့။ သင့်အနေနဲ့ စုဆောင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံငွေရဲ့တစ်နှစ်ကို (၅)ရာခိုင်နှုန်းပဲ ပြန်ရမယ်ဆိုရင်တောင် အသက်(၆၅)နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှ စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ (၃၀၅၂၀၄) အထိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ (၂၀)ကျော်အရွယ်နဲ့ (၃၀)အစောပိုင်းကို လစ်လျူရူပြီး (၃၅)နှစ်မှ စတင်စုဆောင်းရင်းနှီးမယ်ဆိုရင်တော့ အသက်(၆၅)နှစ်မှာ ဒေါ်လာ (၁၆၆၄၅၁) လောက်ပဲ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် တွေ ချရေးပါ။ မှတ်စု စာအုပ်မှာ စာရေးပါ။ စာအုပ်တစ်အုပ် ဒါမှမဟုတ် စီးပွားရေးစိတ်ကူးတွေ၊ စီမံချက်တွေ၊ လုပ်ချင်တာတွေ အားလုံးကို ချရေးထားပါ။ ဒီလို ချရေးထားတာဟာ သင့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေ အတွေးတွေကိုဖော်ပြဖို့အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီး သင့်ဦးနှောက်ကိုလည်း ဆန်းသစ်တီထွင်ဉာဏ်တွေ ဖွံ့ဖြိုးလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီး မိုက်တာမျိုးလုပ်ချင်လား? သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်တမ်း တစ်ခုရေးပါ။
သင့်ရဲ့သူငယ်ချင်း တွေ မိတ်ဆွေတွေ ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင်ကောင်းတွေ လုပ်နေတယ်၊ ဘယ်လိုဝင်ငွေကောင်းနေတယ်ဆိုတာတွေ လိုက်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ပျက်မနေပါနဲ့။ ကိုယ်ပိုင် ရည်မှန်းချက်တွေ၊ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကိုပဲ အာရုံစိုက်ပါ။ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဆီကိုရောက်ဖို့ သင်တတ်နိုင်သမျှအရာအားလုံးကို သင်ယူလေ့လာနိုင်ဖို့ လှုပ်ရှားပါ။
သငျ အသကျ(၂ဝမှ ၂၈ )အတှငျး ဆိုရငျ ဒါကိုမဖွဈမနဖေတျပါ။
အသကျ (၂၀)ကြျောအရှယျဟာ ဘဝမှာ အကောငျးဆုံးအခြိနျ ဖွဈပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျမှာအပွောငျးအလဲတှဖွေဈလာသလို မိဘ တှကေလညျး အရှယျရောကျလာသူတဈယောကျအနနေဲ့ ဆကျဆံလာခြိနျဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့ ဒီအရှယျမှာ ငှရှောဖို့အတှကျကိုလညျး အရမျးကိုစိတျအားထကျသနျနပွေီ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအရှယျမှာ သငျ့အနနေဲ့ ဘှဲ့တဈခုခုရပွီးသညျဖွဈစေ မရသေးဘူးဖွဈစေ၊(၂၀)ကြျောအရှယျနဲ့ နောကျပိုငျးမှာ အောငျမွငျဖို့အတှကျ စတငျပွငျဆငျတတျဖို့အရေးကွီးပါတယျ။ အမြားစုကတော့ ဒီအခြိနျမှာ ထူးထူးခွားခွားပွောငျးလဲမှုတှကေိုလုပျဆောငျဖို့နဲ့ ကွီးကွီးမားမားအောငျမွငျမှုကို ရယူဖို့က အရမျးငယျသေးတယျလို့ ယူဆတတျကွပါတယျ။ တကယျတော့ အသကျ(၂၀)ကြျောအရှယျဆိုတာ သငျ့ ရဲ့ဘဝ တလြှောကျလုံးမှာ အောငျမွငျမှုတှဆှေတျခူးရယူနိုငျဖို့အတှကျ အလအေ့ကငျြ့ကောငျးတှကေို စတငျပြိုးထောငျ မှေးမွူသငျ့တဲ့အခြိနျပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ (၂၀)ကြျောတှအေတှကျ ဒီနလေု့ပျ မနကျဖွနျမှာ ထူးခွားခကျြတှေ ခံစားရမယျ့ လုပျဆောငျစရာ(၇)ခုကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
သငျ့ ရဲ့ပညာရေးကိုဆုံးခနျးတိုငျပွီလို့ မသတျမှတျလိုကျပါနဲ့။ ဆကျလကျလလေ့ာသငျယူနဖေို့လိုပါတယျ။ ဒီလိုပွောလို့ အလုပျထှကျပွီး MBA ဘှဲ့သှားယူဖို့ ဆိုလိုတာမဟုတျပါဘူး။ သငျ တတျနိုငျသမြှ အရာအားလုံးကို သငျယူတတျဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဘာမဟုတျတဲ့အရေးကိစ်စအတှကျ အခြိနျတှအေလဟဿကုနျဆုံးနမေယျ့အစား အခမဲ့တကျရောကျနိုငျတဲ့ သငျတနျးကြောငျး တှမှော လလေ့ာသငျယူပါ။ အခြိနျမရှိဘူးဆိုရငျလညျး အှနျလိုငျကနေ အခမဲ့သငျကွားပေးနတောတှရှေိပါတယျ။ ကွိုးစားရှာဖှေ လလေ့ာပါ။
အမွနျလှုပျရှားရငျ မတျောတဆမှု တှဖွေဈတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မတျောတဆမှု ကိုကွောကျနရေငျ မွနျမွနျလှုပျရှားနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ လူအမြားစုက အလုပျပွောငျးတာလိုမြိုး ထူးခွားတဲ့ပွောငျးလဲမှုတှေ လုပျရမှာကို မှားသှားမလား စိုးရိမျကွောကျလနျ့တတျကွပါတယျ။ သငျ့အတှကျ တဈခုခုအဆငျမပွဘေူးခံစားရရငျ ရုနျးထှကျဖို့အတှကျ ကွောကျနလေို့ မဖွဈပါဘူး။ နယျပယျသဈမှာ သငျအခကျတှခေ့ငျြတှနေို့ငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုရုနျးထှကျလိုကျမှသာ သငျ နဲ့ကိုကျညီမှုကို ရှာဖှတှေရှေိ့နိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ တဈခုမှတျထားရမှာက သငျဘယျကွိမျရှုံးနိမျ့လဲဆိုတာထကျ သငျဘယျလောကျအောငျမွငျလဲဆိုတာကိုပဲ လူတှကေ အရေးစိုကျကွတာပါ။
ဒီတဈခုကို သငျ စိတျဝငျစားမှာပါ။ သငျ့ရဲ့ငှကွေေးနဲ့ ပတျသကျပွီးဘယျလို စီမံရမယျဆိုတာက အရမျးကိုအရေးကွီးပါတယျ။ ကဲ တှကျကွညျ့ရအောငျ။ အသကျ(၂၅)နှဈမှာ စတငျပွီး တဈလမှာ ဒျေါလာ(၂၀၀) စုဆောငျးတယျ ဒါမှမဟုတျ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုလုပျတယျ ဆိုကွပါစို့။ သငျ့အနနေဲ့ စုဆောငျးရငျးနှီးမွုပျနှံငှရေဲ့တဈနှဈကို (၅)ရာခိုငျနှုနျးပဲ ပွနျရမယျဆိုရငျတောငျ အသကျ(၆၅)နှဈအရှယျရောကျတဲ့အခါမှ စုစုပေါငျး ဒျေါလာ (၃၀၅၂၀၄) အထိပိုငျဆိုငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမဟုတျပဲ (၂၀)ကြျောအရှယျနဲ့ (၃၀)အစောပိုငျးကို လဈလြူရူပွီး (၃၅)နှဈမှ စတငျစုဆောငျးရငျးနှီးမယျဆိုရငျတော့ အသကျ(၆၅)နှဈမှာ ဒျေါလာ (၁၆၆၄၅၁) လောကျပဲ ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ရညျမှနျးခကျြ ပနျးတိုငျ တှေ ခရြေးပါ။ မှတျစု စာအုပျမှာ စာရေးပါ။ စာအုပျတဈအုပျ ဒါမှမဟုတျ စီးပှားရေးစိတျကူးတှေ၊ စီမံခကျြတှေ၊ လုပျခငျြတာတှေ အားလုံးကို ခရြေးထားပါ။ ဒီလို ခရြေးထားတာဟာ သငျ့ရဲ့စိတျကူးတှေ အတှေးတှကေိုဖျောပွဖို့အတှကျ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးဖွဈပွီး သငျ့ဦးနှောကျကိုလညျး ဆနျးသဈတီထှငျဉာဏျတှေ ဖှံ့ဖွိုးလာစမှောဖွဈပါတယျ။ ပိုပွီး မိုကျတာမြိုးလုပျခငျြလား? သငျစိတျဝငျစားတဲ့ အကွောငျးအရာတဈခုနဲ့ပတျသကျပွီး မှတျတမျး တဈခုရေးပါ။
ခန်ဓာကိုယျ ကနျြးမာကွံ့ခိုငျဖို့အတှကျ လူတိုငျးလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျသငျ့ပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဆောငျခွငျးကွောငျ့ တဈနလေုံ့းနလေို့ကောငျးနမှောဖွဈပွီး အခကျအခဲတှကေို ကြျောဖွတျဖို့ ယုံကွညျမှုတှလေညျး ပိုရှိလာစမှောဖွဈပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ဦးနှောကျကနျြးမာဖို့အတှကျကတော့ တရားထိုငျပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ တရားထိုငျတာက သငျ့ရဲ့စိတျကို ကွညျလငျလနျးဆနျးစပွေီး မှနျကနျတဲ့ အတှေးတှနေဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှကေို ခမြှတျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ နောကျထပျနညျးလမျးတဈခုအနနေဲ့ ယောဂ လကေ့ငျြ့မယျဆိုရငျလညျး ဖွဈပါတယျ။
သငျ့ရဲ့သူငယျခငျြး တှေ မိတျဆှတှေေ ဘယျလိုအလုပျအကိုငျကောငျးတှေ လုပျနတေယျ၊ ဘယျလိုဝငျငှကေောငျးနတေယျဆိုတာတှေ လိုကျကွညျ့ပွီး ကိုယျ့ကိုယျကို စိတျပကျြမနပေါနဲ့။ ကိုယျပိုငျ ရညျမှနျးခကျြတှေ၊ စိတျကူးအိပျမကျတှကေိုပဲ အာရုံစိုကျပါ။ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျဆီကိုရောကျဖို့ သငျတတျနိုငျသမြှအရာအားလုံးကို သငျယူလလေ့ာနိုငျဖို့ လှုပျရှားပါ။